Soo dejisan Dr.Web 10.1.2 – Android – Vessoft
Soo dejisan Dr.Web
Dr.Web – software ah si loo ilaaliyo nidaamka ka hanjabaado kala duwan. Software waxa uu difaac u qalab ka furin, spam, e-mail ama shabakadda gooryaan, goobaha la content khatar iwm Dr.Web kuu ogolaanayaa inaad si ay u qabtaan si dhakhso ah, oo buuxa iyo la xushay scan nidaamka jiritaanka hanjabaad kala duwan. Software waxuu si ay u abuuraan oo Customize profiles xakameyn ku soo wacay iyo fariimo loogu baahida user ka. Dr.Web bandhigayaa warbixin ku saabsan xiriir firfircoon si ay u internet iyo xaddiga gaadiidka loo isticmaalo oo ay ku codsiyada of nidaamka. Dr.Web kale oo ku jira nidaam gaar ah oo loo isticmaalo in hadii la xado oo ah aalad si aad u ogaato iyo xannibi muuqaalada telefoonka.
Ilaalinta hanjabaado kala duwan
Blocks ee wacay iyo farriimaha
Ilaalinta ka-sites web la content khatar ah
Hababka kala duwan ee baaritaanadaas
Comments on Dr.Web:
Dr.Web Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Avira AntiVir 4.3
العربية, English, Français, Español... Popcorn Time 2.7.6
English, Español, Português, Italiano... Waze 3.9.6.0
العربية, English, Українська, Français... FrostWire 1.6.4
Downloaders Tool inay soo dejisan iyo wadaagaan files ee network BitTorrent. Software waxay bixisaa search soonkii faylasha iyo waxa ku jira fariimaha ka dhisay-in.
English, Українська, Français, Español... Retrica 2.3.3
العربية, English, Українська, Français... Photo Grid 5.06
العربية, English, Українська, Français... BBC News 3.7.1.9
Qaar kale waxay Software ayaa si aad u eegto wararka dhabta ah iyo maqaalo ka mid ah oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn macluumaadka. Codsiga bixisaa wax ka tayo iyo xiiso leh oo ku saabsan dhacdooyinka ee wadamada kala duwan.